၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXIII
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXIII
Posted by Kyaemon on Nov 26, 2017 in Business & Economics, Education, Photography, Think Different, Think Tank, Travel |3comments
၊ပြီးရင်ညွန်းထားတဲ့ ၊နေရာကိုရှာပြီး”၊ကြိုက်”ဆိုတာလက် မ ၊ထောင်တဲ့ပုံကိုနှိပ်ပေးဘို့မမေ့နဲ့နော်၊ကျေးဇူး၊
အမိဧ၇ာဝဒီကိုကာကွယ်​ပါ လယ်​သမားများလုပ်​စ၇ာမ၇ှိ ဆန်​စပါး၇ှားပါးလာနိုင်​ပါတယ်​
ရကားတားလုပ်ရင် ဧရာဝတီ မျိုးကမ်းသွားမှာ စဉ်းစားကြပါ
၊လက်​ရှိ သူတို့တရုပ်​ပြည်​က ယမ်​စီမြစ်​ကြီး ဘယ်​​ပျောက်​သွားလဲ အရင်​ စုံစမ်းရလိ့မ့်​မယ်​
တော့ No ပါကွယ် မစ်ဘေးနေရတဲ့မြို့ ဆိုတော့
ကျ​နော်​က​တောရွာ​နေ​တောသားတ​ယောက်​အ​တွေးနဲ့​ပြောရရင်​ တရုပ်​ကလျှပ်​စစ်​သာမက ​ရေပါယူမယ်​ထင်​တယ်​၊
၊ဆောက်မယ်ကွာ မရရင် နူးကလီယားဓါတ်အားပေးစက်ရုံဆောက်ရမယ်။
၊ကောင်းတယ်ဆက်လုပ် စွန် လွှတ် အနစ်နာ မခံရင် ဘယ်အရာမ မတိုးတက်ဘူး အမိန် ပးတယ်ဆက်လုပ်
USA၊ရောက်မြန်မာများကHoover Dam ရဲ့ အကျိုးကိုခံစားနေရ၍မြန်မာပြည်သားများကို
ဘာမသိ ညာမသိ ရှာက်ရေးနေတာ ငပေါတွေ ဆဲဖို့ သိတယ်
ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် မစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်တာ တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
တစ်ခါခါကျရင် ဘူးဂါးမီးက မလောက်ဘူးနဲ့တူတယ် တခါခါမီးပြတ်တာတွေ့ရတယ်
၊အစ်ိုးရနဲ့ပညာရှင်တွေကအသိဆုံးပါ တကယ်အများအတွက်ကောင်းကျို ရှိမရှိ ဆိုတာ အချိန်ကစကားပြောလာမှာပါ
Meng Zhiguang,astudent of Wuhan University Of Technology (WUST) spent more than halfayear on shooting the high dynamic panorama of top ten landmarks’night view in Wuhan, capital city of Central China’s Hubei.
“I am not that into this city when I first came to Wuhan for schooling, however, I witnessed its perfection step by step in the four years”, Meng Zhiguang told the local media on August 25, adding that he hoped these photos could gaveabetter understanding of this city to his upcoming schoolmates.
Photo 1: Han Show Theatre
Photo 2: Xibeihu CBD (Central Business District)
Photo 3: Erqi Yangtze River Bridge
Photo 4: Hongshan Square
Photo 5: Zhuyeshan Elevated Overpass
Photo 6: Chu River and Han Street
Photo 7: Wuhan International Conference & Exhibition Center
Photo 8: Optics Valley
Photo 9: Hankow Customs House
Photo 10: Wuhan Yangtze River Bridge
Wuhan University 2008 batch – WE MISS U ALL…
Study in China – Wuhan University of Technology [WHUT – Yujiatou]
A shocking truth about MBBS in China
တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပေါင်းကူး အစီအစဉ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ် ၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်တို့ မှ ကျောင်းသား/သူ ၁၀၀ ဦးအား ၄ နှစ်တာ ပညာသင် စရိတ် ထောက်ပံ့
ရန်ကုန် ၊ မတ် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပေါင်းကူး အစီအစဉ်(China-Myanmar Bridge of Friendship Project)ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တွေတက္ကသိုလ် နှင့် တောင်ကုတ် ဒီဂရီ ကောလိပ်တို့မှ ကျောင်းသား/သူ ၁၀၀ ဦးအား ပညာသင်နှစ် (၄)နှစ်အတွက် ပညာသင်စရိတ်များအား ယနေ့ မတ် ၁၀ ရက်တွင် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
China Foundation for Poverty Alleviation Myanmar Office(CFPA)မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် တရုတ်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပေါင်းကူး စီမံကိန်း”China-Myanmar Bridge of Friendship Project” အခမ်းအနားအား ယနေ့ မတ် ၁၀ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုအခမ်းအနားတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီး ဦးကျော်လွင်က ယခုစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူထူးလူချွန်များ မွေးထုတ် ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပြီး စီမံကိန်းကိုလည်း ဆက်လက် အားပေးထောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပြီး ရခိုင်အစိုးရ အနေဖြင့် CFPA အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူး Mr.Yang Shou Zheng က တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးကို နောင်လာနောက်သားများအနေဖြင့် ဆက်လက် တည်တံ့ ခိုင်မြဲအောင် ကြိုးစားကြရန် ၊ ယခု စီမံကိန်းသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့၏ ပညာ သင်ကြားရေးပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အတက်နိုင်ဆုံး ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ့် စီမံကိန်း တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ် နှင့် ဒီဂရီကောလိပ်မှ ကျောင်းသား/သူပေါင်း ၇၀၀ အား ပညာသင် ထောက်ပံ့စရိတ်များ ပေးအပ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တယ်ရယ်ပျက်စီးမှုမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီသွားမည် ဖြစ်ပြီး အခြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအား ခိုင်မြဲအောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု China Foundation for Poverty Alleviation Myanmar Office မှ Deputy Country Director Miss Lin Yuan က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ CFPA အဖွဲ့အစည်းသည် INGO အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိသော ပထမဆုံး China INGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဆူနာမီဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအား စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၁၀ နှစ်ကျော်ခန့် တွင် ကမ္ဘာ့အနှံ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၅) နိုင်ငံတွင် စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ မြန်မာ၊ နီပေါ၊ အီဒီရီုးဗီးယား၊ ဆူဒန်နှင့် ကန်ဗောဒီးယား နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
ရန်ကုန် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကြား နည်းပညာ နှင့် သက်မွေး ပညာသင် ကျောင်းသားများ စေလွှတ်ရေး အစီအစဉ် အရ နည်းပညာ နှင့် သက်မွေး ပညာသင် ကျောင်းသား/သူ ၈၅ ဦးသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပညာတော်သင် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး ဖလှယ်ရေး အသင်း(CEAIE) ၊ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အသင်း နှင့် မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး(ဗဟို) တို့ အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အရ Tianjin Sino-German University of Applied Science ၊ Chongqing Industry & Trade Polytechnic ၊ Chongqing Three Gorges Vocational College ၊ Wuhan Polytechnic ၊ Nanjing Institute of Industry Technology ၊ Suzhou Health College နှင့် Zhejiang Institute of Mechnical & Electrical Engineering,Hangzhou တို့ တွင် နည်းပညာ နှင့် သက်မွေး ပညာရပ်များ သွားရောက် သင်ယူနိုင်ရေး အတွက် ပညာတော်သင် ကျောင်းသား/သူများအား စိစစ် ရွေးချယ်၍ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆို အောင်မြင်သူများအား စေလွတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဒုတိယ အသုတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ-နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များနှင့် ချစ်ကြည်ရေး အသင်း(CPAFFC) ၊ မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး အသင်း(ဗဟို) နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ သံရုံးတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန (မန္တလေး တက္ကသိုလ် နှင့် အစိုးရ နည်းပညာ ကောလိပ် ၊ စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ ၊ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ) ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန (မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ၊ ရေဆင်း ) နှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန(ဆေးဝါး တက္ကသိုလ် ၊ ရန်ကုန်)တို့ မှ ဒုတိယ အသုတ် ကျောင်းသား/သူများအား စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုသွားရောက်ခဲ့သည့် ပညာသင် ကျောင်းသား/သူများအား ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ကိုယ်စား နည်းပညာ ၊ သက်မွေး ပညာ နှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အေးမြင့် ၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ၊ သိပ္ပံများမှ ပါမောက္ခချုပ် ၊ ပါမောက္ခ နှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးများ ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ သံရုံး ယဉ်ကျေးမှု သံမှူး နှင့် သံရုံး အဖွဲ့ ဝင်များ ၊ မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး အသင်း(ဗဟို) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးဝင်း နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ နှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများက ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ပထမ အသုတ် အနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလအတွင်းက ကျောင်းသား/သူ ၈၇ ဦးတို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခဲ့ကြပြီး နန်ကျင်း ၊ ယန်ကျိုး ၊ ထိုက်ကျိုး နှင့် ချန်ကျိုး မြို့ များရှိ တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ၊ သိပ္ပံ များတွင် နည်းပညာ နှင့် သက်မွေး ပညာရပ်များကို လေ့လာ သင်ယူလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၁၇ ခုနှစ် တရုတ် နိုင်ငံ သို့ ပညာတော်သင် သွားရောက်မည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ကျောင်းသား/သူ များအား ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကို သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု သံရုံး တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နှုတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား သို့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဟုန်လျန် ၊ တရုတ် နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုသံမှူး ထျန်ဆန့်ထိန် နှင့် သံရုံး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ခေါင် ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သုတေသန နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မင်းနိုင် ၊ မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးအသင်း(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်းအောင် နှင့် ပညာတော်သင်ဆုရ ကျောင်းသား/သူ တို့မှ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် တရုတ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဟုန်လျန် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် တို့သည် ပညာရေး နှင့် ထူးချွန်သူများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး ကို အထူးအလေးထားကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ သည် မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ညီအကို နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ကာလတစ်လျှောက် မြန်မာ နိုင်ငံ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှု များဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး အနေဖြင့်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ စတင်၍ “တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပညာသင်ဆု/ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးဆု” ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ထူးချွန်၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ကျောင်း/သူ များကို ပညာရေးပြီးမြောက်အောင် အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ပြီး တရုတ် နိုင်ငံ သို့ သွားရောက်ပညာတော်သင်ရန် ကိုလည်း ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့ပြင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကျောင်းဆောင် ကွန်ယက် စီမံကိန်း ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိချိန်တွင် စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁၆ ကျောင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ပြီးစီး ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျောင်းသား/သူ များအနေဖြင့် ပညာသင်ယူပြီးနောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် အရေးပါသည့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းကြောင်း ၊ ကျောင်းသား/သူ များအနေဖြင့်လည်း အနာဂတ် တွင် တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ၊ ဖလှယ်ရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တို့တွင် ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် ပညာတော်သင်ဆုရရှိ သည့် ကျောင်းသား/သူ များ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုညွှန်မှူး ဒေါ်ပွင့်ကေခိုင် က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရာတွင် တရုတ် နိုင်ငံ သည် ကာလတစ်လျှောက် မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူလူထု တို့အား ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ယခုတွင် လည်း ပညာတော်သင်ဆုများ ကို ထပ်မံ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ မှ ကူညီပေးသည့် ပညာတော်သင်ဆု များသည် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် ပညာရေး အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် အစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခု အကြိမ် ပညာတော်သင်ဆု တွင် ၄၆ ဦးမှာ ပါရဂူဘွဲ့ အတွက် ဖြစ်ပြီး ၂၃ ဦး မှာ မဟာဘွဲ့အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ကဏ္ဍအသီးသီး မှ ဝန်ထမ်းများမှ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့် ပညာရေးများကို သင်ယူခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည့် အတွက် လွန်စွာ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မိကြောင်း ၊ ပညာတော်သင်ဆုရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူ များကိုယ်စား ယခုကဲ့သို့ ကြီးမားသည့် အခွင့်အရေး ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သော တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ အား ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ပညာသင်ဆု ရရှိခဲ့သည့် ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ် မှ အင်္ဂလိပ်စာ နည်းပြ ဆရာမ ဖူဂျီကို က ဆင်ဟွာ သတင်းဌာန ၏ မေးမြန်းမှု ကို ဖြေကြားခဲ့ရာတွင် တရုတ် နိုင်ငံ မှ ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည် ကို သိရှိရချိန်တွင် လွန်စွာ ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရကြောင်း ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ကျောင်းသား များအား ပညာသင်ဆု ပေးအပ်ရာတွင် တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ သည် အများဆုံး ပေးအပ်သည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အခြားနိုင်ငံများ နှင့်မတူဘဲ ပါရဂူဘွဲ့ အထိ ပညာတော်သင် ဆုများ ကို ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း ၊ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိရန် တရုတ် နိုင်ငံ သို့ မိမိကိုယ်ပိုင် သွားရောက်ပါက လွန်စွာ အကုန်အကျများပြီး နှစ်ရှည်ထောက်ပံ့မှု ပေးရမည် သင်ကြားမှု တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ မှ ယခုကဲ့သို့ ကူညီပေးခဲ့သည့် အတွက် လွန်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအကြိမ် တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ကျောင်းသား/သူ ပေါင်း ၁၀၃ ဦး သည် တရုတ် နိုင်ငံ သို့ ပညာတော်သင်ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ကျောင်းသား/သူ များအနေဖြင့် တရုတ် နိုင်ငံ ကျဲ့ကျန်း တက္ကသိုလ် ၊ ဝူဟန့် တက္ကသိုလ် ၊ ပေကျင်း နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် နှင့် ပေကျင်းဆရာအတတ်သင် တက္ကသိုလ် တို့တွင် သွားရောက်ပညာ သင်ကြားကြရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်။(Xinhua)
တရုတ် နိုင်ငံ ဝန်ကြီး ဆုန့်ထောင်း က တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးဆေးရုံသစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုအားကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး လက်ဆောင် ပေးအပ်လိုကြောင်းပြောကြား
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်လည်ပတ်ရေး ခရီး ရောက်ရှိ နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဆုန့်ထောင်း (Mr.Song Tao) က တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံသစ် ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်သူလူထု အား ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး လက်ဆောင် ပေးအပ်လိုကြောင်း တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံသစ် ဖြစ်သော ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံသစ် အကြိုဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
5 AUGUST 2017 HITS: 2096
Kyae Mon has written 711 post in this Website..
Kwee Lay LIn Htut, Maung Shine and 297K others
ကြေးမုံဂျီးဂို ခြစ်တယ်.. တူတူနေခြင်ပီ… မ မွ